Wasiirka Warfaafinta P/land oo sheegay in Deni uu ka dhammaaday dulqaadkii uu u hayay… – Hagaag.com
Wasiirka Warfaafinta P/land oo sheegay in Deni uu ka dhammaaday dulqaadkii uu u hayay…
Wasiirka warfaafinta Puntland, Cali Sabarey ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland uu ka dhammaaday dulqaadkii uu u hayay saxaafada , isagoo yidhi” Madaxweynuhu wuxuu zero ka yahay inuu xamilo qaladka warbaahinta.”
Waxaa oraahyadiisiii kamid ahaa,” Waalagasoo baxay casrigii dad yar ay talin jireen. Waxaa la rabaa shacabku inuu codkiisu taliyo. Waxaa la rabaa rabitaanka shacabka in lagu shaqeeyo. Xilligii wax la qarin jiray waa dhamaatay. Codkiina waa shaqeynayaa.”